आफू सुध्रिने की मिडियालाई दोष दिने सरकार ? « Kakharaa
आफू सुध्रिने की मिडियालाई दोष दिने सरकार ?
२७ चैत, काठमाडौं । चैत २८ र २९ गते सर्वसाधारणलाई उपत्यकाबाट बाहिर जान दिने समाचार सार्वजनिक भएको दुई घन्टा नबित्दै यस्तो निर्णय नभएको समाचार बाहिरियो ।
यतिबेला सामाजिक संजालमा नेपाली संचारमाध्यममाथि टिका टिप्पणी भैरहेका छन् । कतिपयले संचारमाध्यमको बिश्वासमाथि नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर, यो सूचना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै सार्वजनिक गरेको खुलेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा नै यो सूचना पोष्ट गरिएको छ ।
‘लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिन खोज्नु भएका वासिन्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको उच्च स्तरिय समितिको बैठकले भोलि र पर्सि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय गरेको छ ।’ पेजमा पोष्ट गरिएको सूचनामा भएको छ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यस विषयमा प्रस्ताव आएको तर कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । उनले आज उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक नै नभएको र कुनै कार्यसूची समेत नभएको समेत बताएका छन् । उनले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा सत्यता नभएको समेत आफ्नो स्टाटसमा उल्लेख गरेका थिए ।
पोखरेलको यो विज्ञप्ति आएलगतै सचिवालयले स्टाटस एडिट गरेको छ। ‘स्थानिय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरुले मान्यता नदिएको हुनाले भोली र पर्सि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ ।’ अपडेट गरिएको स्टाटसमा भनिएको छ ।
उसो त प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि समाचारको भ्रममा नपर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो । भोलि र पर्सि उपत्यका बाहिर जान पाइने भन्ने होइन । ‘समाचार’को भ्रममा नपर्नुहोला ।’ उनले यस्तो स्टाटस लेखिरहँदा उनी कार्यरत कार्यालयको आधिकारिक र भेरिफाइड सामाजिक सञ्जालबाट यो सूचना बाहिरिएको हो ।
सरकार आफैँले सूचना दिएर पछि मिडियालाई दोष दिएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले दुईजनामा कोरोन भेटियो भनेर वेब बोर्डमा सूचना दिएको थियो । र पछि सञ्चारमाध्यमलाई दोष लगाउँदै पन्छिएको थियो । यसरी आफैँ सूचना चुहाएर सञ्चारमाध्यममाथि पटक-पटक प्रहार कहिलेसम्म ?